Artemisa - यसको ठूलो स्वास्थ्य लाभ | बेजिया
सुसाना Godoy | 18/06/2022 14:00 | कल्याण
हामीलाई राम्ररी थाहा छ, त्यहाँ धेरै बिरुवाहरू छन् जसले हामीलाई हरेक दिन तिनीहरूको ठूलो फाइदाहरूको साथ मद्दत गर्दछ। ठिक छ, यस अवस्थामा हामी पछाडि छोडिने थिएनौं जब हामीले आर्टेमिसलाई उल्लेख गर्यौं। निस्सन्देह, यदि तपाइँ उसलाई यो नामबाट चिन्नु हुन्न भने, सायद यो तपाइँलाई धेरै परिचित लाग्दछ यदि हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यसलाई वर्मवुड वा सेन्ट जोन्स wort पनि भनिन्छ.
सायद अब तपाईले पहिले नै बुझ्नुभएको छ कि हामी कस्तो प्रकारको बिरुवाको बारेमा कुरा गर्दैछौं। खैर, उनीसँग धेरै छन् स्वास्थ्य लाभ तपाईलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ थप रूपमा, ती सबै धेरै वर्ष पछाडि जान्छन्, हामीले उल्लेख गरेको प्रभावकारिताको लागि धन्यवाद। त्यसोभए, हामी यसलाई थप विचार दिने छैनौं र हामी ती महान गुणहरू के हो भनेर पत्ता लगाउन जाँदैछौं।
1 Mugwort ले तौल घटाउन मद्दत गर्छ
2 मासिक पेटका ऐंठन लाई राहत दिन्छ
3 तपाईंले पेटको भारीपनलाई पछाडि छोड्नुहुनेछ
4 तिमीले पीडा बिर्सनेछौ
5 म यो बिरुवा कसरी लिन सक्छु
Mugwort ले तौल घटाउन मद्दत गर्छ
पक्कै पनि तपाई सधैं केहि किलोबाट छुटकारा पाउन उत्तम तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि यो खाना बन्द गर्ने कुरा होइन तर स्वस्थ खानाहरू परिचय गर्ने कुरा हो। त्यसोभए, दिनको ती मुख्य खानाहरूको पूरकको रूपमा, हामीसँग आर्टेमिसा बिरुवाको ठूलो मद्दत हुनेछ। किनभने यसको सबैभन्दा टिप्पणी गरिएका फाइदाहरू मध्ये, यो मुख्य मध्ये एक हो। यसले तपाईलाई तौल घटाउन मद्दत गर्छ किनभने यो शुद्धिकरण गर्ने बिरुवा हो। के गर्ने कि शरीर डिटक्सिफाई गर्न आदर्श हुनेछ। तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ कि मूत्रवर्धक खानाहरूसँग, तपाईं तरल अवधारणबाट बच्नुहुनेछ र सामान्यतया, तपाईं धेरै राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ।
मासिक पेटका ऐंठन लाई राहत दिन्छ
प्रत्येक महिना ती तीव्र क्र्याम्प भएका महिलाहरूलाई थाहा हुनेछ कि हामी के कुरा गर्दैछौं। किनकि अत्यन्त पीडादायी हुनुका साथै, हामीलाई कसरी लगाउने भन्ने पनि थाहा छैन, हामीले तिनीहरूलाई शान्त पार्न सधैं राम्रो समाधान खोज्दैनौं। त्यसोभए, यदि तपाइँ प्राकृतिक उपचारहरूमा शर्त लगाउन चाहनुहुन्छ भने, आर्टेमिस तपाइँको पक्षमा हुनेछ। तपाईंले पिरियडको कोलिकलाई पछाडि छोड्नुहुनेछ तर यो पनि हो कि यसले यसलाई विनियमित पनि गर्नेछ। त्यो पनि नबिर्सि, धन्यवाद, तपाईंसँग थप प्रवाह हुनेछ। त्यसोभए, यो सबैको लागि, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईलाई लाग्दैन?
तपाईंले पेटको भारीपनलाई पछाडि छोड्नुहुनेछ
पेटका धेरै समस्याहरू छन् जुन हामीलाई दिनभरि हुन सक्छ। एक धेरै पटक पाचन संग छ। खाना पछि देखिने त्यो भारीपन सबैभन्दा कष्टकर हुन्छ। त्यसैगरी वि. ग्यास निर्माण वा रिफ्लक्स पनि तिनीहरूले संकेत गर्छन् कि पाचनले सामान्यतया लिने चरणहरू पछ्याउँदैन। त्यसोभए, यसलाई मद्दत गर्न र प्राकृतिक तरिकामा, यो यो बिरुवा पनि हुनेछ जुन हामीले खातामा लिनुपर्छ। किनभने यसले यी सबै लक्षणहरूलाई कम गर्छ यसको शुद्धिकरण कार्यहरूको लागि धन्यवाद।
तिमीले पीडा बिर्सनेछौ
पहिले हामीले महिनावारीको दुखाइको बारेमा उल्लेख गरे पनि अब हामी जोर्नीहरूको दुखाइमा फर्कन्छौं। थोरै आर्टेमिस तेलले मसाजले तपाईंलाई आवश्यक राहत दिन्छ। किनभने पनि शान्त गुणहरू छन्। त्यसोभए, यो समय हो कि आफैलाई यस जस्तो प्राकृतिक समाधानबाट टाढा लैजान दिने ती तीव्र पीडाहरू कम गर्नको लागि जुन कहिलेकाँही तपाईंलाई दैनिक आधारमा जारी राख्न अनुमति दिँदैन।
म यो बिरुवा कसरी लिन सक्छु
मुख्य फाइदाहरू देखिसकेपछि, तपाइँ ती फाइदाहरू देख्न सुरु गर्न कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेर सोच्नुहुनेछ। ठीक छ, यो धेरै सरल छ किनभने तपाईंसँग धेरै तरिकाहरू छन्। एकातिर तपाईं यसलाई इन्फ्युजनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ विशेष गरी जब यो हामीले उल्लेख गरेको महिनावारी दुखाइको उपचार गर्न हो। तर उदाहरण को लागी, जोर्नी दुखाइ कम गर्न को लागी, तपाइँ आर्टेमिस तेल संग मालिश पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्फ्युजन र तेलको अतिरिक्त, तपाइँ यसलाई पाउडरमा पाउनुहुनेछ तर यदि तपाइँ यसलाई यस तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, प्रत्येक दिन3ग्राम भन्दा बढी नगर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसैगरी, यो गर्भवती महिलाका लागि पनि उपयुक्त छैन र हामी सधैं भन्छौं, तपाईले यसलाई खानु भएकोले कुनै असर गर्दैन, तपाईलाई वृद्धहरूमा अन्य रोग लाग्दा डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् वा अर्को उपचार लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » कल्याण » Mugwort: यसको ठूलो स्वास्थ्य लाभ